केन्या २०२२ मा शीर्ष १० धनी परिवारहरू - Victor Mochere
हामी मध्ये थोरै मात्र अरबपति बन्नेछौं, तर सबैको परिवार छ। पारिवारिक सम्पत्ति भनेको परम्परा, सम्पदा, वंश, प्रामाणिकता र गुणस्तरका मूल्यहरूको मूर्त रूप हो। प्रायः तिनीहरू धनी व्यक्तिहरू भन्दा फरक विश्वव्यापी अपील प्रदान गर्छन्। एउटै परिवारमा सम्पत्ति नोट गर्ने प्रमुख तरिका भनेको यदि उनीहरूले आज काम गर्न छोडे भने, उनीहरूसँग पाँचदेखि छ पुस्तालाई राम्रो आकारमा राख्न पर्याप्त छ भन्ने महसुस गर्नु हो। परिवारको एक पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा हस्तान्तरण भएको सम्पत्तिले कुनै न कुनै रूपमा राजपरिवारको सुझाव दिन्छ।
यहाँ केन्यामा शीर्ष १० धनी परिवारहरू छन्।
$ 3.5 अर्ब
$ 3.3 अर्ब
$3अर्ब
$ 2.8 अर्ब
$ 2.3 लाख
$ 2.2 लाख
$ 1.8 अर्ब
$ 1.5 अर्ब
$ 1.3 अर्ब
$ 1.2 अर्ब
तपाईंको बच्चालाई गफ र अफवाहहरू सामना गर्न कसरी मद्दत गर्ने
केनेडी सिताटी भन्छन्:
जनवरी 7, 2022 11 मा: 52 हूँ
यसैले तिनीहरू आफ्नो सम्पत्ति जोगाउन तिनीहरूमध्ये एकलाई जोड दिइरहेका छन्
Emeka Ezeokoli भन्छन्:
जनवरी 9, 2022 10 मा: 28 हूँ
त्यसोभए केन्याको सबैभन्दा ठूलो उद्यम स्पष्ट रूपमा राजनीति हो! सत्तामा रहेका र सत्ताको गलियारेहरूले मात्र राज्यको अख्तियारको लाभ उठाउँछन् र उनीहरूले आफ्नो, परिवारका सदस्यहरू, साथीहरू, सहयोगीहरू र साथीहरूका लागि उपयुक्त ठानेको हजारौं हेक्टर जमिनलाई उपयुक्त ठान्छन्।
के यो कुनै दुर्घटना हो कि मोई र केन्याटा परिवार 1-2 मा आए, तिनीहरू राजनीति बाहेक कुन "व्यवसाय" को लागि परिचित छन्? अफ्रिकी महादेशमा, विशेष गरी कालो भाग, धनी र गरिब बीचको खाडल एउटा घाटी हो! 'नफले भने।